HomeEngland“Duufaanadu Wey Dhamaan Doonaan , Cadceeduna Wey Soo Bixi Doontaa.”- Mata
Ciyaaryahanka Khadka dhexe ee kooxda Manchester United , Juan Mata , ayaa rumaysan in kooxdiisu ka soo kaban doonto guuldaradii 3-0 ka ahayd ee ay gurigooda Old Trafford ugu dhiibtay Liverpool Axadii Doraad.
Manchester United ayaa guul daro xanuun badani ka soo gaadhay kulankii Derbiga ahaa ee ay la ciyaareen Liverpool , kadib markii laba rigoodhe oo uu ka dhaliyey Steven Gerard oo mid saddexaadna laga qabtay uu gool saddexaad u raaciyey Luis Suarez , halka Nemanja Vidic kaadhka cas lagaga saaray Garoonka.
Mata ayaa tilmaamay in “Arimuhu ku xumaadeen” intii ciyaartu socotay , ka horna ay soo qaateen “maalmo tababar ah oo farxad iyo rayn rayn badnaa”.
“Duufaantu way dhamaan doontaa, cadceeduna markale ayay soo bixi doontaa.” Ayuu Mata ku qoray bartiisa Inter net ka ee Grada360. “ Shaki igagama jiro inay taasi dhici doonto, qofna ma odhan waa hawl yar , laakiin waxani waa kubad.” Ayuu raaciyey.
“Waxay ku siinaysaa wakhti fiican , hadana waxay kuu xigsiinaysaa mid kugu adag, waa inaad la qabsataa. Marka aad guusha hantiyayso ilaa daqiiqada u dambeysana ha ahaatee.
“Waa inaan sheegaa todobaadkii aanu garoonka tababarka ku soo jirnay inuu ahaa mid raaxo leh oo farxad badan , waxaanan kulanka ka hor rajo fiican ku qabnay inaanu guusha anagu hantiyayno.
“Si kastabase ha ahaatee, maalintii aanu ciyaaraynay , wax kastaa waxay noqdeen mid nagu foorara oo nagu xun, waxa na qabsaday guuldaro xun, waxaanan idiin sheegayaa inaanu wax kasta samayn doono si aanu u ilawno arintan , ciyaaraha kale ee noo dhiman.”
Kooxda United ayaa Arbacada, Old Trafford kula ciyaari doonta Olympiakos horyaalka Champion ka wareegiisa 16 ka. Waxaanay rajo fiican ku qabtaa inay iska soo badi doonto labadii gool ee lagu lahaa lugtii hore , una bixi doonto rubuc dhamaadka horyaalka Yurub.